दिल्ली दुर नही हे
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार तथा वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौचीले भारतमा कोरोना संक्रमणको ‘सुनामी’ रोक्नका लागि केही हप्ता पूर्णरुपमा लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कुनैपनि देश लकडाउनमा जान नचाहे पनि कोरोना संक्रमणको चक्र तोड्नका लागि केही हप्ता लकडाउन आवश्यक रहेको डा. फौचीको भनाइ छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनु महत्वपूर्ण भएपनि त्यसको असर देखिन केही समय लाग्ने भएकाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य समाग्री र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
छिमेकी देश भारतमा आजबाट दैनिक ४ लाखभन्दा माथि कोरोना संक्रमीतको संख्या पुगेको छ । त्यसको असर हाम्रो देश नेपालमा पनि देखिएको छ । गत वर्ष यही समय हो, जतिबेला दैनिक १ सयको संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको समाचारले हाम्रो जिउ जिरिङ्ग हुन्थ्यो । आज एक वर्षपछि हाम्रो पनि पनि दैनिक ५ हजारभन्दा बढि संख्या पुष्टि हुन थालेको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने हामी पनि भारतको सुनामीबाट जोगिने छैनौं ।
कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट कुरा उठिरहेका छन् । विज्ञहरुका भनाइ पनि आइरहेका छन् । तर, अहिले हामीले भेट्दा खोप लगाउने कुरामा दुइमत हुदैन । अवश्य पनि मोटरसाइकल चलाउँदा हामी हेल्मेट लगाउन विर्सदैनौं । हेल्मेट लगाए पनि दुर्घटनाबाट मर्नेको संख्या धेरै छ । तर, त्यो भन्दा बढी हेल्मेट लगाएका कारण बाच्नेको संख्या पनि छ । त्यसैले अरु केही नभएपनि खोपले अवश्य पनि हेल्मेटको काम चाही गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
तर, अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको कोरोनाको दोस्रो लहरको चेनलाई ब्रेक गर्नु नै हो । त्यसका लागि एक मात्र विकल्प भनेको कडा लकडाउन हो भन्ने कुरामा अब हामीले दुईमत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार तथा वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौचीले भारतलाई दिएको सल्लाह पनि यही हो । यदि उनले नेपाललाई सल्लाह दिए भने पनि यही दिनेछन् । तर, यहाँ लकडाउन गर्नका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रशासनलाई पनि हात जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । शनिबार रातिबाट प्रदेशको राजधानी विराटनगर र त्यसको आसपास केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर, त्यसको पालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । यदि हामीले यो निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना नगर्ने हो भने दिल्लीको अवस्था यहाँ आउदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । सबैलाई थाहा हुनपर्छ ‘दिल्ली दुर नही हे’ त्यसैले सबैले सजग हुनुको विकल्प छैन ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले देश आक्रान्त बनेको छ । हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । तर, जनताले सरकारको अनभुति गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले देशमा हाहाकार हुनुभन्दा पहिला हात उठाएको छ । हामीसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छन् । तर, उनीहरुसँग आवश्यक स्रोत र साधन मात्र हैन, दक्ष जनशक्तिसमेत छैन । कोरोना सबैको घर आँगनमा आईसकेको छ । बजारमा हिँड्नेहरु अहिले पनि माक्स नलगाई हिँडिरहेका छन् ।
अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेको उर्दी पनि धेरैले मान्ने गरेको पाइदैन । जिल्ला प्रशासनमा निषेधाज्ञा वा लकडाउनमा पास लिनेहरुको भिड लाग्नथाल्छ । अनि पहुँच हुनेहरुका हातमा पास हुन्छ, नहुनेहरुको विल्लीबाठ त हुन्छ नै, कोरोनाको चेनलाई ब्रेक गर्ने काममा समेत असहयोग हुन्छ । केही दिन हामी सबै घरभित्र नै सुरक्षित बस्यौं भने आफू पनि बचिन्छ र अरुलाई पनि बचाइन्छ । यो समय त्यति धेरै जादैन भन्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । वैशाख र जेष्ठ महिनामा यसको फैलने क्रम धेरै देखिएको छ । त्यसैले यसलाई जसरी भएपनि चेन तोड्नुको विकल्प छैन । अहिले पनि मोरङका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा विद्यालय खुल्लै छन् । काठमाडौंबाट ठूलो संख्या ग्रामिण क्षेत्रमा आएको छ । यसले गर्दा हाम्रा शहर बजार मात्र हैन, गाउँसमेत असुरक्षित छन् । ग्रामिण इलाकामा त झनै स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा कमजोर छ । मास्क लगाउने बानी ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाहरुमा परिसकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा समेत मास्कलाई अनिर्वाय गर्न नसकिरहेको बेला ग्रामिण क्षेत्र झनै असुरक्षित छ ।
यतिबेला हाम्रो मिडियाहरुमा कोरोना संक्रमण र मृत्युको भनेर समाचार मात्र पढ्न पाइन्छ । तर, तीन तहका सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको उदाहरणीय र अनुकरणीय काम पढ्न पाइएको छैन । वास्तवमा हाम्रा सरकारहरु यस्तो महामारीको बेला पनि कानमा तेल हालेर बसेका हुन् या उनीहरुले गरेका काम मिडियामा नआएका हुन्, भन्नसक्ने अवस्था छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोरोनाका उपचार र नियन्त्रणका लागि जे गरिरहेका छन्, त्यो बाहिर आउनु आवश्यक छ । जनतामा कोरोनाको त्रास मात्रै छ सरकारसँगको आश शुन्य प्रायः बन्दै गएको छ । यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।